कुखुरामा आफ्नै हातमा राख्नुहोस्। सीट कसरी सिसामा कुर्सिन्छन्
यी नयाँ फर्नीचरहरू खरिद गर्न सट्टा, धेरै पुरानो स्तरवृद्धि गर्न मनपर्छ। इन्टरफेस ताजा गर्नुहोस् , कुर्सियों को हात मा आफ्नो हात (या कुर्सियों, सोफे, आदि) बनाइन्छ। उनीहरूको मद्दतले तपाईलाई लामो समयको लागि यी आन्तरिक वस्तुहरू बचत गर्नेछ। यसको अलावा, हटाउन सकिने आवरणको लागि यो धेरै सजिलो छ। कहिलेकाहीँ कुर्सियों र कुर्सियोंमा ढाकिएको पातहरू पादरीबाट सुरक्षाको लागि सिने छन्।
खरिद वा सिलाई गर्न?
तपाईं तैयार-निर्मित कवर खरीद गर्न सक्नुहुन्छ, तर अक्सर यो उपयुक्त सामानहरू फेला पार्न गाह्रो छ जुन कोठाको भित्तामा पूर्णतया फिट हुन्छ। यसकारण, यो मुद्दा हाम्रो निर्णयमा यो निर्णय लिन अधिक उचित छ।
ढाँचाहरू इन्टरनेटमा डाउनलोड वा पत्रिकाबाट प्रतिलिपि गरी नियमको रूपमा कुर्सी वा कुर्सीको एक विशेष मोडेल फिट नगर्नुहोस्। प्रत्येक मामला मा निर्णय व्यक्तिगत हुनु पर्छ।
जब लिङ्ग कोठामा कुर्सियोंको लागि सिलाई सिङ्ग गर्दै , तपाई महँगी कपडाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, विभिन्न प्रकारका बनावटहरू मिलाउनुहोस्, मूल शैलीको साथ आउँनुहोस्, सामान्य रूपमा, तपाईंको कल्पनाको लागि पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुहोस्। कुखुरामा सुन्दर कोलोक्स, आफैले बनाएको - रचनात्मकता देखाउन उत्तम तरिका। तपाईं आन्तरिक टोनको प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईं सक्नुहुन्छ, यसको विपरीत, रङ्ग लिपिहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्। कुनै पनि अवस्थामा, कोठा अनूठा हुनेछ, र अतिथिहरूले तपाईंको स्वाद र कौशलको प्रशंसा गर्नेछन्।
हामी भान्सा सजायौं
टेबल वरपर राखिएको कुर्सियों र स्टूलहरू, कोठालाई एक सभ्य, हँुलो पनि केहि हदसम्म उपस्थिति दिनुहोस्। यस अवस्थामा, तपाईं चिन्ताको बिरोध र कुखुराको माछाको कुरो बारे चिन्ता गर्नुहुन्न, किनकि आवश्यक भएमा, आवरण हटाउन सजिलो छ। उनीहरूको टाउकोको कल्पना गर्थे, सम्पूर्ण कोठाको रङ योजनाको खातामा राख्न नबिर्सनुहोस्।
भान्सा कुर्सियों को एक व्यावहारिक कपडा संग सर्वश्रेष्ठ सजावट, हेरविचार मा अद्वितीय। यस अवस्थामा, सामग्री पर्याप्त घना हुनु पर्छ। यो मनमा जन्मेको हुनुपर्दछ कि अरूको तुलनामा भान्सा कुर्सियों लाई सबैभन्दा ठूलो भारको अनुभव गर्दछ।
भान्साको भान्साको लागि सामान धेरै महंगी सामग्रीबाट बनाइने छैन, किनकी उनीहरूलाई अरु भन्दा बढी प्रायः धोई गर्नुपर्नेछ, र उनीहरूको प्रायः पूर्ण प्रतिस्थापनको चाँडै आवश्यक पर्दछ। भित्ताको ढोकामा टोपी पनि सम्भव छ।
हामी बच्चाहरु को कोठा लाई सजाय गर्छौं
एक विशेष वार्तालाप बच्चाहरु को कोठा मा कवर को बारे मा छ। सबैलाई थाहा छ कि घर मा बच्चाहरु को उपस्थिति संग, समर्थन को आदेश अधिक मुश्किल हुन्छ। बच्चाहरू बोल्ड ह्यान्ड्स, टुक्रिएको कुकिलोसँग सबै कुरा हान्न मन पराउँछन्, कुर्सीमा चिपचिपा औंलाहरू चकलेटबाट चढ्छन्। फ्रान्सेलीको वर्तमान मूल्यमा तपाईं निरन्तर त्रास हुनुहुनेछ र तपाईंको बच्चालाई डराउनु पर्छ, जुन अत्यन्त अनावश्यक छ।
समस्या सजिलै सस्ती कपडेबाट आवरणको साथ समाधान गरिएको छ। तिनीहरू अजीब साना जनावर वा परी कथा पात्रको रूपमा बनाइन्छन्। यस अवस्थामा, सजावटको कल्पना असीमित छ। र आवरणका ढाँचाहरू सरल हुन सक्छ।
बच्चाहरु को कोठा मा कवर को लागि कपडे कपास, उज्ज्वल, हंसमुख रंग लेने के लिए वांछनीय है। पिंजरे, धारीहरू, ठूला मटरहरूमा कपडा बनाएर आफ्नै हातले कुर्सियोंमा कुखुराहरू अनुहारमा राख्छन् र बच्चालाई दुर्व्यवहार गर्छ। कुकुरहरु संग सजावट संग सजाया जा सकता है।
के म सफल हुन सक्छु?
थाहा छैन कि कसरी आफ्नो हातले कुर्सियों मा आवरण सिलाई सिमाउन को लागी ? डरलाग्दो छैन? व्यर्थमा!
यो एकदम सरल पाठ हो जुन हरेक व्यक्तिको लागि पहुँचयोग्य छ र ठूलो वित्तीय लागतको आवश्यकता पर्दैन, जस्तै कि नराम्रो वा नयाँ फर्नीचर किन्न। आफ्नो हातमा कुर्सियों मा क्राफ्टिंग क्लक्सहरू सिन्धुपाल्चोकमा मात्र आफ्नो हातको प्रयास गर्नेहरूको लागि एक आदर्श व्यायाम हो। सबै पछि, आवरणको ढाँचा बनाउछ, साथै पनि तकियाहरू, कपडाहरूको ढाँचा बनाउने भन्दा सजिलो छ। प्राय: तिनीहरूसँग आयताकार आकार र विवरणहरूको न्यूनतम छ।
यदि तपाइँसँग नयाँ फर्नीचर सेट किन्नको लागी पैसा छैन भने, बढी तपाईं कुर्सियोंमा कभर सिलाई कसरी सोच्ने बारे सोच्नुहुन्छ। उनीहरूको सहयोगको साथ, तपाईं पुरानो साथ हालै खरिद गरिएका कुर्सियोंको एक सेटमा संयोजन गर्न सक्नुहुनेछ। यसको अतिरिक्त, स्वयं बनाइएका घटनाहरूले बाँचेर कोठा, भान्सा वा बच्चाको कोठाको नयाँ मूल्य बिना नयाँ खर्च सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। यसरी, यो आकर्षक शौकले परिवारको बजेटलाई पनि बचत गर्नेछ।
यो शुरुवात सजावटका लागि सिफारिस गरिएको छ सरल देखि शुरु गर्न - एक स्टूलको डिजाइन। हातमा घाम, अनुहारमा कालोक्सहरू, उत्कृष्ट सजावटी सिट कवर गर्न अघि अभ्यास गर्न एक राम्रो तरिका हो। यदि तपाइँसँग कुनै सिलाईको अनुभव छैन भने, सस्तो कपडाबाट आवरण बनाउन पहिलो प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं पुरानो पानाबाट प्रशिक्षण आवरण पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा रङ्ग गरेर काम गरेर र फेरि फेरि सिलाई। टाइप गरेपछि, बोल्न, एक हात, यो "लक्जरी" महंगी सामग्रीमा स्विच गर्न अनुमति छ।
कवर र क्लोक्स पनि एक कुर्सी या सोफा संग घटाइएको हुन सक्छ, तर यो अनुभव हो स्वामीहरूको लागि पहिले नै एक कार्य हो। कुर्सियों मा क्लोक्स बनाउन को लागी आफैले सरल विकल्प हो, सबैलाई उपलब्ध गराउन। Armrests र सिलाई थप तकियाको बारेमा चिन्ता गर्न कुनै आवश्यक छैन।
कुर्सीको आवरण आफैलाई कसरी बनाउने?
क्यापहरूको लागि, तपाईं कपासको सामग्री लिन सक्नुहुन्छ, स्पर्शमा सुखद र स्थिर बिजुली संकलन गर्न सक्नुहुन्न। वा पलिएस्टर, जुन टिकाऊ छ, खाली हुँदैन र सफा गर्न सजिलो छ। छनौट मा निर्भर गर्दछ कि कपडा प्रयोग गरिने छ, कति चोटि धोएको छ। आवरणका लागि धेरै महंगा सामग्रीहरू लायक छैन - किनभने तिनीहरू चाँडै खराब छन्।
साथै, तपाईंलाई सामानहरूमा निर्णय गर्न आवश्यक छ। निर्णय गर्नुहोस् कि तपाईं कसरी आफ्नो क्याप्सन सजाय गर्नुहुन्छ। तिनीहरू सजावटी बहादुरहरू, अखबारहरूका लागि जेबहरू र विभिन्न ट्राफिकहरू र भित्री भित्ताहरू पनि सजिलै संग सजाय हुन सक्छन्।
हामीलाई के चाहिन्छ?
यो काम गर्न के लागी हुनेछ? सजावटी कपडा (हरेक कुर्सी वा स्टूलको लागि कम्तिमा कम्तिमा एक मिनेट), रङ, कैंची, टेप माप, प्यानहरू, र बेशक, सिलाई मेसिनको लागि उपयुक्त रिबन।
कामको सुरुवात गर्नु अघि हामीले कपडा, यसको इनभ्वाइस र रंगको साथ परिभाषित गर्नेछौं। सामान्य गृहपृष्ठको पृष्ठभूमिको विरुद्ध समाप्त परिणाम कल्पना गर्न प्रयास गर्नुहोस्। कपडाको ढाँचा चयन गर्दा, ठाडो स्ट्रिप्सलाई स्टाइलिश आधुनिक टच ल्याउँनुहोस्, मोनोग्रामले अमीर बनाउँछ र धनी बनाउँछ।
सामान्यतया, प्रत्येक कुर्सीको लागि दुई भन्दा बढी मिटर बाँकी छ। कार्टमा यसको खपत कटौतीको ढाँचा पछाडि गणना गरिन्छ, र गणनामा यो आवश्यक छैन कि "स्कर्ट" कोनेहरूमा तहको लागि कपडाको आवश्यक रकम बनाउन।
सिलाईहरू आफ्नै हातमा कुर्सियोंमा राख्नु अघि एक ढाँचा बनाउनुहोस्। व्यक्तिगत रूपमा कुर्सीको प्रत्येक टुक्रालाई मापन गर्नुहोस्, आयामहरू रेकर्ड गर्नुहोस् र मोटो कागजमा रेखाचित्र खिच्नुहोस्, पूर्ण आकारमा सबै विवरणहरू चित्रण गर्नुहोस्। त्यस पछि कागज खाली गर्न कपडामा राखिएको कपडामा राखिएको खण्डमा कटौती गरिन्छ। विवरणहरू गलत पक्षबाट विपरित रंगको धागे सँगसँगै मिश्रित हुन्छन्।
उत्पादनको "ड्राफ्ट" कुर्सीमा कोसिस गर्यो। यदि workpiece राम्रो तरिकाले बस्थे र समायोजनको आवश्यकता छैन, समुद्रहरू सिलाई मिसिनमा सिन्दै छन्, रूपरेखा हटाइयो। प्रत्येक सागर सावधानीपूर्वक फलाम गर्न नबिर्सनुहोस्।
काट्ने प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा - "स्कर्ट" अन्तर्गत भत्ताको लागि स्टक छोड्न नबिर्सनुहोस्। यो पनि ध्यान दिइनेछ कि कपडा धुनु पछि हटना गर्न सक्छ। यदि कुर्सियों को खुट्टा को बीच को दूरी को तल बढाए पछि, अतिरिक्त "पंखों संग कवर संग यस्तो" flared "आंतरिक वस्तुहरु लाई सजाइन्छ।
ब्याकडारको साथ साधारण कुर्सीका लागि क्लासिक आवरणमा प्रायः5भागहरू हुन्छन्। यो सीट, यसको ब्याक, ब्याक, "स्कर्ट" को विवरण र वास्तव मा "स्कर्ट"। पछाडिको आवरण र सीटको पछाडि एक विवरण हो जसले कुर्सीको पछाडि माथि फैल्छ।
बुटको रूपरेखा तान्नुहोस्, backrest, सीट उचाई, साथै यसको गहिराई र चौडाइको उचाइ र चौडाइ मापन गर्नुहोस्। कपडा खपत "स्कर्ट" को लंबाई अनुसार निर्धारण गरिन्छ, र प्रत्येक तहमा 32 सेन्टीमिटर थपिनुपर्छ। सागर भत्ता कम्तिमा 1 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। यदि कपडाको चौडाई पुरा "स्कर्ट" को लागि पर्याप्त छैन, यो व्यक्तिगत टुक्राबाट एकत्र गर्न सकिन्छ। यस अवस्थामा, हामीले अतिरिक्त खण्डको लागि भत्ताको बारेमा बिर्सनु हुँदैन।
आवरण कसरी मिलाउने?
एक घर सज्जाकारले मात्र आफ्नो हातले कुर्सियों मा आस्तीन सिलाई कसरी कुकुर राम्रोसँग सजग हुनुपर्छ, तर कसरी कुकुरहरूमा सुरक्षित राख्ने। यो विभिन्न तरिकामा गर्न सकिन्छ - बटनहरू, लाइटनिंग्स, वेल्क्रो, सजावटी सम्बन्धहरूको सम्बन्धको साथ। सामानहरू पैरमा दृढ भई निश्चित हुनुपर्छ। यदि तपाइँ सीटहरू र पछाडिको लागि व्यक्तिगत आवरण बनाउन सोचिरहेका हुनुहुन्छ भने, तपाईंले विचार गर्नैपर्छ कि तिनीहरू कसरी सँगै बाँध्न।
प्राय: प्राय: फास्टेनङहरू क्यान्सरहरूमा क्यान्सरको रूपमा बनाइन्छ, जुन कुर्सीको खुट्टामा बाँधिएका छन्। अति तंगको ढाँचा बस कुर्सी चढ्न सक्दैन। यो केहि रिजर्व संग सिलाई राम्रो छ, जो सिकुना पछि गायब हुनेछ, र यदि होइन, यो zadekorirovann हुन सक्छ।
सजावटी सम्बन्धहरू हातले पखाल्दै छन्। तिनीहरू स्वतन्त्र हुन सक्छन्। कपडाबाट संकीर्ण ट्यूबहरू सिंक छन्, उनीहरू अगाडिको तिर फर्काउँछन्, तिनीहरूका अनुहारहरू भित्रिएका छन् र गुप्त सीमसँग सिउँन्छन्। यदि तार को निर्माण संग फिड गर्न को लागी कुनै इच्छा छैन, तपाईं तयार रेटेड ब्रेक लिन सक्नुहुन्छ, उदाहरण को लागि कपास। आवरणको सुरक्षा तपाईंको कल्पनामा निर्भर गर्दछ। तपाईं velcro, हुक वा सुन्दर सजावटी धनुषको सहयोगको साथ तय गर्न सक्नुहुनेछ।
आवरण संलग्न गर्नको लागि अर्को विकल्प सीटको किनारेको छेउमा हेम (एकै समयमा फैलाउने कपडाको खपतको बारेमा बिर्सनु भएको छैन) लाई हाल्नु हो, यसमा लोचदार ब्यान्ड वा कर्ड घुम्नुहोस्, जो कडा र बलियो हुन्छ। यो विकल्प एकदम सही छ यदि तपाईं सीट अलग र कुर्सी को पछि मा कवर। एक नियमको रूपमा, बन्धन को यो तरिका सम्बन्धहरु भन्दा सीट कवर मा राम्रो तय छ, यो backback बिना मल र कुर्सियों को लागि धेरै सुविधाजनक छ।
कसरी सजावट कमाने को लागी
आफ्नै हातमा कुर्सियोंमा क्लोकहरू बनाउन क्षमताले ठोस लाभ ल्याउन सक्छ।
विवाहको लागी फर्नीचरको लागि सजावटको सजावट, रूसमा लोकप्रियता प्राप्त हुँदैछ। जो लोग एक सजावट को पेशा मा आफु को खोज गर्न को लागी, भोज र विवाह को हॉल को कपडे संग राम्रो तरिकाले अर्जित गर्छन।
एकै समयमा, यो हरेक पटक नयाँ घटनाहरू अर्को घटनाको लागि सिमाउन आवश्यक छैन, यो फरक रंगका थुप्रै सुरुङ सेटहरू छन् र उनीहरूलाई ग्राहकको छनौट प्रदान गर्न पर्याप्त छ। निस्सन्देह, एकै समयमा अवस्थित नियमित नियमित वाशिंग र इस्त्री गर्ने आवश्यकता पर्दछ, किनकि यो भाप जनरेटरको लागि वांछनीय छ।
दुई छोराछोरीको लागि बेड छनौट गर्दा कुन कुरालाई डोऱ्याइनुपर्छ?
तलका दराजको साथमा बिस्तर: हेराइहरू र फोटोहरू
"घोषणा" (व्यञ्जन): ग्राहक समीक्षा
कुर्सीका लागि गजलिफ्ट: उपकरण र सञ्चालनको सिद्धान्त
बाथरूममा सिङ्क अन्तर्गत आरामदायक र व्यावहारिक दुर्गन्ध
सबैभन्दा लोकप्रिय र उपयोगी HTML नेटवर्क को बढावा दिन को लागि मेटा-ट्याग
घरमा कागतीको रुख बढ्दै
जाम एक स्वादिष्ट खमीर केक बनाउन
एलिसन DiLaurentis टेलिभिजन श्रृंखला देखि "सुन्दर साना Liars"
फुलेको नसाहरु। को खुट्टा मा नसाहरु crawl, के गर्ने?
"Sportmaster" बोनस कसरी प्रयोग गर्ने? "Sportmaster" मा बचत क्लब कार्ड: प्रत्येक खरिदका लागि बोनस
जब बिरालोको बच्चाहरुको आँखा खुला?
तपाईं स्वादिष्ट पकौडी कसरी खाना पकाउनु थाहा छ?
स्याउ के सपना जान्न चाहनुहुन्छ? सपना पुस्तक मदत गर्नेछ!
एउटा सानो सहरमा व्यापार: सफल कसरी
पवित्र सहभागिता को लागि नियम र Canons